မနှစျကဒီလိုအခြိနျမှာ လုပျအားခခြှေးနညျးစာနဲ့ မိခငျကျို ရှှေ သိနျး 60 ကြောျဖိုးဆငျပေးနိုငျခဲ့ပ မေယျ့ အခုခြိနျမှာတော့ ဘာမှမထောကျပံ့နိုငျသေးဘူး လို့ရငျဖှငျ့စကားဆိုလာတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲမငျးသားဖွိုး ရာဇာနိုငျ” – XB Media & News
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးရာဇာနိုင်ကတော့ မောင်မြင့်အဖြစ် ” မျက်လုံးမှာအလွမ်းနှုတ်ခမ်းမှာမာန ” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာမောင်မြင့် ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ MRTV – (4) ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသားတစ်လက်ပါ။ ချောမောတဲ့ ရုပ်သွင်ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ယောကျာ်းပီသတဲ့ သွင်ပြင်ကြောင့် ပရိသတ်တွေသတိထားမိလာသူလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့” ကနြောျ့ ခြှေးနညျးစာလေးနဲ့ အမေ့ကျို ရှှေ သိနျး 60 ကြောျဖိုးဆငျပေးနိုငျပွီ 🥰 🎁အဖနေဲ့ အမကေ အမွဲးသားသ မီးအတှကျ ရုနျးကနျရတာပငျပနျးနပေါပွီ …. 😞သာသမီးတှအေတှကျဆိုဘယျတော့မှလကျမတှနျ့ဘူး ရှိရငျတစျမြိုး မရှိရငျတစျမြိုး အမွဲဖွညျ့ဆညျပေးခဲ့တယျ …အဖေ့အတှကျ မလိုပါဘူး သားရယျ … အမေ့အတှကျမလိုပါဘူးသာရယျ ဆိုပွီး အမွဲးပွောခဲ့တယျ…. 😢သားသမီးလေးယောကျကို ပညာတကျဘှဲ့ရအောငျ ပညာတှသေငျပေးခဲ့တယျ ”
အဖေနဲ့အမေ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲ သားသိပါတယ် ..ရှေ့လျှောက် အဖေနဲ့အမေကို မျက်နှာမငယ်ရအောင် ထားမှာမို့ … ကျန်းမာ ရေးသာကောင်းအောင်နေပါနော် ….🥰🥰အရမျးခစြျတယျ ဖဖေေ နဲ့ မမေေ 🥰🥰🥰”ဆိူတဲ့စာလေးနဲ့မနှစျဒီ လိုအ ခြိနျမှာ အမြားကွီး ထောကျပံ့နိုငျခဲ့တာဖွစျပွီး ဒီနေ့မှာတော့ ” တစျနှစျပွညျ့ပွီ ဒီနှစျတော့ဘာမှလုပျပေးနိုငျသေးဘူး 😌”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ဝမျးနညျး စှာရငျဖှ ငျ့ခဲ့တာပါ။ပရိသတျတှကေလညျးမိဘအပေါျသိတတျလှနျးတဲ့ဖွိုးးရာဇာနိုငျအတှကျအားပေးစကားနဲ့ခြီးမှမျးစကားတှမှေတျခကြျပေးခဲ့ကွတာပါ။CeleGabarပရိသတျတှလေညျး မိဘအပေါျသိတတျလိမ်မာတဲ့ ဖွိုးရာဇာနိုငျအလုပျတှအေဆငျပွဖေို့ဆု တောငျးပေးခဲ့ပါဦးနောျ။
Source- phyo yazar naing
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ၿဖိဳးရာဇာႏိုင္ကေတာ့ ေမာင္ျမင့္အျဖစ္ ” မ်က္လုံးမွာအလြမ္းႏႈတ္ခမ္းမွာမာန ” ဇာတ္လမ္းတြဲထဲမွာေမာင္ျမင့္ ဇာတ္ေကာင္အေနနဲ႔ ပရိတ္သတ္အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့တဲ့ MRTV – (4) ဇာတ္လမ္းတြဲ မင္းသားတစ္လက္ပါ။ ေခ်ာေမာတဲ့ ႐ုပ္သြင္ကိုပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ေယာက်ာ္းပီသတဲ့ သြင္ျပင္ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြသတိထားမိလာသူလို႔လည္း ဆိုရမွာပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့” ကေျႏာ်႕ ေျခႇးနည်းစာေလးနဲ႔ အေမ့က်ိဳ ေရွွ သိန်း 60 ေၾကာ်ဖိုးဆင်ေပးႏိုင်ပြီ 🥰 🎁အဖေနဲ႔ အမေက အမြဲးသားသ မီးအတွက် ႐ုန်းကန်ရတာပင်ပန်းနေပါပြီ …. 😞သာသမီးတွေအတွက်ဆိုဘယ်ေတာ့မွလက်မတွန်႕ဘူး ရွိရင်တစ်ၿမိဳး မရွိရင်တစ်ၿမိဳး အမြဲဖြည်႕ဆည်ေပးခဲ့တယ် …အေဖ့အတွက် မလိုပါဘူး သားရယ် … အေမ့အတွက်မလိုပါဘူးသာရယ် ဆိုပြီး အမြဲးေပြာခဲ့တယ်…. 😢သားသမီးေလးေယာက်ကို ပညာတက်ဘွဲ႔ရေအာင် ပညာတွေသင်ေပးခဲ့တယ် ”
အေဖနဲ႔အေမ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းခဲ့လဲ သားသိပါတယ္ ..ေရွ႕ေလွ်ာက္ အေဖနဲ႔အေမကို မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ ထားမွာမို႔ … က်န္းမာ ေရးသာေကာင္းေအာင္ေနပါေနာ္ ….🥰🥰အရမ်းချစ်တယ် ဖေဖေ နဲ႔ မေမေ 🥰🥰🥰”ဆိူတဲ့စာေလးနဲ႔မႏွစ်ဒီ လိုအ ၿခိန်မွာ အျမားကြီး ေထာက်ပံ့ႏိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီေန႔မွာေတာ့ ” တစ်ႏွစ်ပြည်႕ပြီ ဒီႏွစ်ေတာ့ဘာမွလုပ်ေပးႏိုင်ေသးဘူး 😌”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ဝမ်းနည်း စွာရင်ဖွ င်႕ခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေကလည်းမိဘအေပါ်သိတတ်လွန်းတဲ့ဖြိဳးးရာဇာႏိုင်အတွက်အားေပးစကားနဲ႔ၿခီးမွမ်းစကားတွေမွတ်ခၾက်ေပးခဲ့ကြတာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း မိဘအေပါ်သိတတ်လိမ္မာတဲ့ ဖြိဳးရာဇာႏိုင်အလုပ်တွေအဆင်ပြေဖို႔ဆု ေတာင်းေပးခဲ့ပါဦးေနာ်။